Igwefoto IQ: Na-eji Eziokwu Akpadoro (AR) Iji mepụta Ngwa Ahịa Achọpụta | Martech Zone
Igwefoto IQ, a no-koodu imewe n'elu ikpo okwu maka Augmented Adị (AR), amalitela Virtual Gbalịa-Na-andiwet, ihe eji arụ ọrụ nke ọgbara ọhụrụ na - eme ka ọ dịrị ngwa ngwa maka ụdị ọmarịcha mma, ntụrụndụ, ụlọ ahịa na ngalaba ndị ọzọ iji wuo ihe ọhụụ AR dabeere na Virtual Gbalịa-On ahụmahụ. Ngwọta ohuru na-eseghachi azụmahịa AR site na-enyere ndị ụdị aka ịhazi ngwaahịa ha site na iji ndụ ha na-eme ihe ziri ezi na ihe dị adị ma na-agbakwunye ọtụtụ ụdị aha na ụdị puru iche nke na-emetụta ma na-akpali ndị ahịa site na igwefoto ha.
Ọ bụ ezie na azịza ndị ọzọ chọrọ edemede na usoro nhazi oge ma ọ bụ mmepụta na mmepe sara mbara, Igwefoto IQ nke Virtual Try-On Composer na-eme ka ọ dị mfe maka ụdị iji wuo ahụmịhe, nke a na-emewanyewanye nke eziokwu (AR) na oke obere oge, yana achọghị koodu nzuzo. Ngwaọrụ ahụ na-enye ọtụtụ nhọrọ ịhazi ahazi nke na-enye ụdị mgbanwe iji hazie ahụmịhe AR nke nwere njirimara dị mfe dịka agba, ọdịdị, udidi, mmecha, na ndị ọzọ. Ma ọ bụ na ha nwere ike bulite ụdị 3D nke aka ha, yana Virtual Gbalịa-Na-andiwet na-atụgharị ngwaahịa na-akpaghị aka n'ime igwefoto ka ha wee nwee ike tinye ya na mkpọsa ọ bụla.
N'adịghị ka ndị ọzọ nkà na ụzụ na-agbalị na-na nkà na ụzụ, na Igwefoto IQ, ụdị nwere ike ime ka ahụmịhe ha nke Virtual Gbalịa-Na ahụmịhe nke eserese eserese eserese iji kwado njikọ aka, mmekọrịta mmekọrịta, na okekọrịta. Onye mebere Virtual Gbalịa na-abịa na ọbá akwụkwọ nke ndebiri a gwọrọ edepụtara iji mezuo ebumnuche azụmahịa dị ka ịmatakwu banyere mwepụta ngwaahịa, ịre ahịa ahịa na iji anya ngwaahịa na ngwa, ịkụziri ndị ahịa otu esi eji ngwaahịa ha, na ndị ọzọ. Dị nwere ike ịhazi ndebiri ahụmahụ AR ndị a, ọbụnakwa mepụta atụmatụ mmekọrịta na ahụmịhe ha site na ịtinye ihe na-akpata maka ịpụta ma ọ bụ omume ga-eme na ụfọdụ ndị na-akpalite, dị ka onye ọrụ imeghe ọnụ ha ma ọ bụ ịpị ihe. Igwefoto IQ na-ebuputa ahụmịhe AR n'ọtụtụ na Facebook, Instagram, Snapchat na nyiwe ndị ọzọ, na-enyere ndị na-ege ntị aka imeghe okwu okike ha mgbe ha na-anwale ngwaahịa ọpụrụiche.
Igwefoto IQ igwefoto kachasị ọhụrụ bụ ihe na-agbanwe egwuregwu maka ndị otu m. UI ohuru a di omimi ma di oke mgbanwe. Ikike itinye 3D akụ ma jikwaa ha na ezigbo ọnọdụ 3D na-eme ka o kwe omume iwepụ ihe okike anyị na ọkwa ọzọ ọsọ ọsọ na mfe.
Doug Wick, Onye Nhazi Ọdịnaya Nestlé Purina North America
Igwefoto IQ Virtual Try-On Composer
Igwefoto IQ igwefoto na-enyere ụdị aka ịme ndị na-ege ntị ntị ma na-ere ngwaahịa ọ bụla n'akụkụ ọ bụla nke ndị ahịa. N'iji usoro ha emeputaghi koodu maka ahia AR, ndi ahia nwere ike igbanwe ngwa ahia ha na ihe omuma ha ka ha buru ezigbo ihe omuma nke oma na ndi mmadu na ndi mmadu.
Dịka otu egwuregwu zuru ụwa ọnụ na-arụ ọrụ mba ụwa dịka Viacom, Atlantic Records, Nestle, EA, MAC Cosmetics, Away na ndị ọzọ, Igwefoto IQ na-arụ ọrụ gafee ụlọ ọrụ iji mee ọtụtụ nde ndị ahịa kwa ụbọchị.
Obi abụọ adịghị ya na nrụpụta ọrụ nke AR maka ịnwale ndị na-agba ọsọ, mana nke ahụ bụ mmalite nke ihe AR nwere ike ime iji weta ụdị na ndị na-ege ha ntị nso. Ọbụghị naanị na AR nwere ike ịchụpụ azụmaahịa mmekọrịta mmadụ na ibe ya site n'inyere ndị ahịa aka iji anya nke uche hụ ngwaahịa, mana ọ na-enyere ha aka ịmekọrịta ụdị na ụzọ ọhụrụ ọhụụ site na ịmekọrịta ihe. Mgbe ụdị dị iche iche lụrụ ịba uru na ihe ọchị nke AR, nke ahụ bụ mgbe ha hụrụ mmetụta kasịnụ na ROI ha: njikọ aka ha na-arị elu, ọ ga-abụkwa na ntugharị na-abawanye site na 250%. Anyị malitere Virtual Try-On Composer iji nyere aka mee ka ụdị ahịa dịkwuo ngwa ahịa azụmahịa ha, ihe mgbochi mmepe dị ala, ma mee ka ọ dị mfe ịmalite ịmepụta ahụmịhe bara uru na nke AR. Ugbu a akara ọ bụla nwere ike ịbụ onye okike AR!
Allison Ferenci, onye isi oche na onye nchoputa igwefoto IQ
Iji mee ememme mwepụta nke ọhụrụ Virtual Try-On ngwaahịa, Igwefoto IQ esorola ndị ama ama na ndị na-emeri ihe nrite na-emeri akara. David Lopez, Keita Moore, Doniella Davy, na Erin Parsons ike dijital etemeete anya na oyiri omenala etemeete nka. Brandsdị ịma mma nwere ike inye ndị na-ege ha ntị ike ịnwale nchikota ọ bụla nke lipstick, blush, eyeshadow, eyeliner, eyelashes, ma ọ bụ ngwa, ha niile nwere agba agba, ọdịdị, mmecha, na ihe ndị ọzọ iji kwekọọ na ngwaahịa ha.
Brandsdị ire ere nwere ike ịme ka ngwaahịa ha dị mfe iji mepụta ahụmịhe ndị na-enye ndị ahịa ohere iji anya nke uche ha hụ ka ngwaahịa ha ga-esi pụta ụwa, ma ọ bụ akara egwu nwere ike ịhapụ ndị egwu iji mepụta aha mbinye aka nke onye na-ese ihe site na vidiyo ma ọ bụ mkpuchi album. Akụkụ nke ahụmịhe nke Virtual Gbalịa-Na ahụmịhe ndị nwere ike wulite na Igwefoto IQ Igwefoto enweghị oke.
Gbalịa igwefoto IQ's AR Rịọ a ngosi
Tags: kwadokwara ọkpụkpọ òkù eziokwuigwefoto iqecommercengwaahịa nwaamebere ngwaahịa na-agbalịVirtual Gbalịa-Na-andiwetnkà na ụzụ na-agbalị na-na nkà na ụzụ